Indlela yokususa i-cellulite ezandleni?
Umzimba omhle liphupha labasetyhini abaninzi. Abanye abantu baye banikezela umlinganiselo ohambelanayo, abanye bazama kanzima ukufezekisa ukufaneleka kwabo, kwaye okwesithathu ayisebenzi, kwaye nakwimfumba, ezinye iindawo zomzimba zonakaliswa "nge-orange peel" okanye i-cellulite. I-Cellulite yindawo egciniweyo yokubeka i-deposit, ihlala isenziwa kwindawo yezandla, izibonda, iimbombo kunye nesisu. Ebusika, i-cellulite ingafihlwa phantsi kweebhola, iidanti. Ewe, ekuqaleni kwenkathi yasebhankini, amantombazana ase-cellulite anentloni ukuvela elunxwemeni. Yaye ukuba iinqununu zingabonakali phantsi kweemfutshane, kunye nesisu phantsi kwe-swimsuit, akukho nto ingenziwa ngezandla.
Yintoni enokuyenza nge cellulite ezandleni kunye nendlela yokujongana nayo? Oku akunzima kakhulu. Kufuneka udle ngokufanelekileyo, yenza iinkqubo zesikhumba sengxaki kunye nokuzivocavoca. Kodwa masithethe ngazo zonke iinkcukacha ngokubanzi.
Indlela yokuphelisa i-cellulite?
Ukuba i-cellulite isendaweni yamagxa, kunokuba kunzima ukuyiqeda, kwaye kuyimfuneko ukulungela le ngxaki ngokuxhobile ngokupheleleyo. Iziphumo zokuqala ziyakubonwa malunga nenyanga yokusebenza kanzima. Ngoko, isicwangciso: ukusila, ukuqeqeshwa kwansuku zonke, ukucoca kunye neenkqubo zokuhambisa amanzi. Ukuba intombazana ende kwaye uhlale ekhaya, mhlawumbi unokufumana ithuba lokujikela kumacandelo ochwepheshe kunye nabagadi bezobugcisa, bahlaziyelela iinkqubo zakho ngabanye, ngoko bengazi. Kodwa ukuba ungumfazi onomdla, musa ukuphelelwa lithemba. Ukufezekisa iziphumo, kungekho khozhesalonnogo, unakho nakwikhaya, kuphela ixesha loku kufuna le nto. Ukufumba kunye nokuzivocavoca kuya kuxutyushwa ngezantsi.
Shintsha indlela ophila ngayo
Ukuhlala phambi kwikhompyutha, ubukele i-movie elandelayo kunye nokuhlafuna umqulu, umcimbi awuyi kusuka kwindawo efile, kwaye i-cellulite iya kubonakala ngakumbi. Ngoko ke, bathandekayo abathwali be-cellulite, vuka uhambe, wenze ubuncinane ukufudumala okuvela kumanyathelo athile okuqala kunye neendiza ezininzi. Ukuba une cellulite, oku kubonisa ukuba uqhuba ukuhlala kwindlela yokuhlala kunye nokuphila. Ngoko ke, qhubela phambili xa umsebenzi wakho "ungasondeli," uze uvuke kwiimitha ezingama-30, hamba ujikeleze iofisi uze wenze ukunyakaza kwezandla ngezandla zakho nentamo. Kunceda kakhulu ukwenza i-aqua aerobics kunye nesifuba sokubhukuda. Okulungileyo empini yokulwa "nencwadana" ye cellulite inceda ibhoksi. Unika umthwalo kwiengalo zakhe, emva nangamahlombe. Musa ukuyiqhayisa, musa ukulayisha ngaphezulu kwamagxa akho.
I-Cellulite ivela kwinkqubo yokuphazamiseka kwemethambo, kunye nangenxa yokungondleki. Awukwazi ukulwa ne-cellulite kunye nezithintelo zokutya. Ukuthintela ukutya, unako ukulahlekelwa isisindo ebusweni nasesifuba, kodwa kwiimeko ezinqabileyo kakhulu, le ndlela izokunceda ekulwa ne-cellulite ezandleni. Ukuze unqobe i-cellulite, kufuneka unciphise ngokuthe ngcembe umxholo wekhalori wokutya kwaye ungabandakanyi ukutya okunobungozi obunobungozi (ubumnandi, ukutshaya, othosiweyo, utyisi, ubhaka, ukutya okuvela kuMcdonald's). Kwinqaku lakho kufuneka udibanise imifuno, iziqhamo, iimveliso zobisi, inyama ephilileyo. Into ebalulekileyo yokulwa ne-cellulite kukubuyisela umonakalo wokuphazamiseka komzimba kwaye wenze ukuba umzimba ungagcini "inqolobane". Kwaye ukuze ungadli rhoqo iikhalori kwindawo yokuzivocavoca, unokubhenela kwiintsuku ezimfutshane uze uphuze iitroba ze-herbal, kuya kunceda ukulungelelanisa imetabolism.
Yindlela efanelekileyo yokulwa ne-cellulite. Kodwa kunikezelwa ukuba i-massage iya rhoqo kwaye ihluke.
Ukusilalisa kakuhle kukukho nekhofi. Iphucula ukunikezelwa kwegazi kunye ne-lymph flow, i-acrome ineempembelelo zokukhawuleza nokuphakamisa, inciphisa umxholo wamanzi okhulayo. Unokubhenela kwi-massage ne-anti-cellulite creams. Ukubunjwa kwe-vich kuqulethe izinto ezizodwa ezikunceda ukuphula ama-tissue amafutha. Ukusilalisa, ungasebenzisa izixhobo ezikhethekileyo: i-mittens, iifenki zokucoca okanye i-massage ye-roller, unokwenza i-massage nezandla. Kukho nawuphi na, umphumo uya kuba ngowomnye - ukusabalalisa kwegazi kunye ne-lymph emzimbeni, ukuhamba kwe-oksijini kwindawo yengxaki, ebangela ukukhuthazwa kwe-metabolism.
NeMidlalo ngokubhekiselele kwi-cellulite
Ukuba uqeqesha imisipha yakho imihla ngemihla, unokufumana iziphumo ezilungileyo kwaye ushiye i cellulite kungabi namathuba okuphila. Ukuzivocavoca kuya kwenza ukhenkcela kwesikhumba, izihlunu ziya kutsalwa kunye ne-relief relief iya kubonakala. Iipushoutshi zona zisebenza kakhulu. Abaqalayo banokwenza i-push-ups eludongeni, ngoko, kwiiveki ezintathu, unokuya kwi-push-ups kwisihlalo okanye kwibhentshi epakini, kwaye emva kweminye iveki ezintathu ungashenxisa phantsi. Ukongeza, i-push-ups inokukwenziwa nge-dumbbells okanye i-barbell, ukuba akukho namnye unayo, unokuzalisa iibhotile ngamanzi uze uwasebenzise kwiigraji. Umele ulale ebhentshini, ubeke iinyawo zakho phantsi, ufake izandla zakho emva kwentloko kwaye uziphakamise kwizinga leso. Unokuphakamisa iingalo zakho kumacala. Ukuba unayo ibha esandleni sakho, kufuneka ubeke kwindawo yesifuba uze uyiphakamise ngaphezu kwesifuba.
I-cellulite elungileyo inceda kwaye ihluke isitya. Imizuzwana engamashumi amathathu uphalaza amanzi abandayo, ushushu. Kodwa ngokucophelela, ungazitshisi, amanzi kufuneka abekezelele kwesikhumba.
I-Wraps ihlukile - i-salon kunye nekhaya. Ekhaya, unokwenza izixhobo ezisuka kwi-oilcitrus, i-ginger, i-seaweed, indawo yekhofi.
Umfazi ngamnye, ukuba ufuna, uya kufumana indlela yokulwa ne-cellulite, kodwa khumbula ukuba unyango olungcono lukhuselo. Kule meko, kukutya okunempilo, imidlalo kunye nokuzimela. Yaye ukhumbule ukuba impumelelo engamaphesenti angamashumi asibhozo kwimeko nayiphi na imeko kuxhomekeke kuyo-ekuqeqesheni. Kwaye akukho namnye ongakunceda kulo mbandela, kuba ngenxa yalokhu awufunanga nje kuphela ubugcisa, kodwa unomnqweno onyanisekileyo wokutshintsha ukubonakala kwakho, kunye nempilo yakho.
Ukudibanisa okungabonakaliyo - kunye nokuchasene
Iidraphe zokuhlamba iisaliti
Indlela yokwenza igrume ekhaya
Ukulwa nokulwa ne cellulite ekhaya
UMaxim Vitorgan wathetha ngengxoxo enzima nomkakhe
Umphumo wengxolo emzimbeni womntu
U-Anne Hathaway ongumdlali waseHollywood
Abathathi-nxaxheba abadumileyo beNdlu-2
Ikhofi kunye neCoconut Shake
Ubulumko bokupheka inyama yenkomo
Yintoni enokuyenza ukuba yonke into imbi kwaye akukho nto isebenzayo
Yintoni okufuneka uyibele umntwana ophilileyo?
Iingcebiso ezifanelekileyo zokunyamekela intamo kunye nobuso